Marketing amin'ny mailaka amin'ny isa | Martech Zone
Marketing amin'ny mailaka avy amin'ny isa
Sabotsy, Martsa 10, 2007 Sabotsy, Oktobra 20, 2018 Douglas Karr
Ilay namako akaiky, Chris Baggott, efa hamoaka ny bokiny voalohany, Email Marketing By the Number. Nanoratra an'io boky io i Chris Fivarotana Ali, namako iray hafa.
Chris dia mpiara-miasa mpanorina ao ExactTarget, ilay orinasa iarahako miasa amin'ny maha Product Manager ahy. Ny bilaogin'i Chris (miaraka amin'ireo mpitarika sy mpiasa mahafinaritra hafa) dia nanosika ny ExactTarget ho any amin'ny stratosfera - nantsoina hoe iray amin'ireo orinasa 500 mitombo haingana indrindra ao amin'ny firenena.
Tsy ny fahafinaretako hiara-hiasa amin'i Chris ao amin'ny ExactTarget ihany koa, fa izaho kosa manomboka voalohany ao amin'ny bokiny - miresaka momba ny mandeha ho azy sy ny fampidirana. Manantena ny hamaky ny boky aho ary koa ny fientanam-po amin'ny fahitako ny tenako amin'ny fanontana! Nanoratra ho an'ny gazety aho ary efa tany amin'ny magazine, nefa tsy boky velively. Tena nanosika ahy hanomboka hanoratra ny tenako io, manana pejy 75 eo amin'ny zavatra nianarako tamin'ny taona voalohany nitorahana bilaogy aho. Mila miverina aminy anefa aho!
Chris koa dia manomboka ny orinasany manaraka, Rindrambaiko Compendium. Faly aho niara-niasa tamin'i Chris tamin'ity fanombohana ity ihany koa - nandany hariva izahay niresaka ny fahasarotan'ny mampiditra bilaogy mpampiasa interface tsara sy ny tsy fahafahan'ny mpamaky mahita mora ny atiny. Hahita Compendium eo amin'ny sari-tany tsy ho ela ianao manao izany! Tsy te-hamoaka be loatra ao anaty kitapo eo amboniny aho, fa faly kosa aho mahita ny fahitan'i Chris lasa tena izy ExactTarget nanao. Chris dia miasa amin'ny Compendium amin'ny fotoana feno izao. Manan-janakalahy mankeny amin'ny oniversite aho, ka tsy maintsy nisafidy ny làlana azo antoka ary hifikitra amin'ny orinasa efa nipoaka!
Alao mialoha ny kopian'ny Marketing Email anao amin'ny isa! Ny mailaka dia mbola teknolojia tsy mampino miaraka amina fampanantenan'ny taonina. Tsy toy ny teknolojia hafa, ny mailaka miorina amin'ny fahazoan-dàlana dia mbola lohalaharana amin'ny marketing amin'ny "push". Izany hoe, nomenao alalana hifandray aminao aho, ary azoko atao ny manosika anao hifandray aminao rehefa mila izany aho. Fahitalavitra, Radio, Gazety, RSS dia mbola manana fiankinan-doha lehibe amin'ny mpanjifa, mpanjifa na fanantenana 'tuning in'. Ny mailaka dia nanjary ampahany amin'ny fiainana andavanandro ho antsika (tsy fantatro izay nataoko talohan'ny mailaka!) Ary hitohy hijanona amin'izany fomba izany.
Tsy andriko ny haka kopian'ny boky! Ary tsara kokoa ny halaina otograprazy, Chris!
Tags: chris baggottmailaka Marketingboky marketing mailakamailaka amin'ny marketing amin'ny isa
Technorati Rank WordPress Plugin Version 2 Navoaka!
Hitako ny tranokalanao tamin'ny fikarohana an'ity boky ity; ) Toa mendrika ny hijerena azy ity.
Enga anie! Chris dia bandy mahafinaritra ary evanjelista amin'ny mailaka izay nalaza tamin'ny herin'ny mailaka erak'izao tontolo izao nandritra ny 5 taona lasa. Voaporofo ary mialoha ny toroheviny. Ny mailaka dia jerena kely toy ny teknolojia “omaly” fa na inona na inona. Ireo mpivarotra dia mahita fampidirana mailaka, pejy fidirana, fandefasana nateraka sns ... dia mitarika fivezivezena sy fidiram-bola bebe kokoa hatrany amin'ireo tranokalany.
Apr 11, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Manaiky aho. Aza atao ambanin-javatra mihitsy ny herin'ny mailaka apetraka tsara amin'ny lisitr'ireo mpisafidy indroa.
Apr 27, 2007 amin'ny 8: 49 AM
Boky mahafinaritra IZY ary ny buzz dia nanomboka nanodidina azy teo amin'ny faribolantsika tany Atlanta. Doug, tsara ny mahita ny bilaoginao sy ny firariana tsara ho anao, Chris sy ireo mpitarika eritreritra ao amin'ny Exact Target and Compendium. Miverena any Atlanta ary manaova steak miaraka amiko indraindray! Scott
Apr 27, 2007 amin'ny 9: 20 AM
Mahafinaritra ny maheno anao ary faly mahita anao aho! Manantena ny hihaona aminao indray aho tsy ho ela.
Ho an'ireo olona tsy mahalala: Famaritana6 dia iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny fampiasana teknolojia amin'ny Marketing. Raha misy orinasa tokana niarahako niasa tamin'ny dokambarotra, automatisation ary ny fahaizana mampiasa ny herin'ny tsirairay avy, dia ny Definition6.
Scott sy ny ekipa dia mpitarika eritreritra tanteraka ao amin'ny indostria. Faly aho fa hiara-hisakafo hariva amin'i Michael Kogon (CEO) sy Scott indray alina ary fofonaina madio izany. Nidina avy tany Atlanta aho tamin'ny buzz, velona niaraka tamin'ny hevitra ary faly niverina tamin'ny fanatsarana ny vokatra.
Microsoft dia nanaiky ny Definition6 imbetsaka noho ny faharanitan-tsaina sy ny fahaizany. Ekipa tsy mampino! Rehefa mijery ny 'Agency of the Future' isika dia heveriko fa efa ohatra tsara ny Definition6!
Misaotra nijanona ary nampahafantatra ahy fa eto ianao, Scott!